Tatitry ny mpisera : Felahan’i Shina ireo orinasa mpanome tolotra aterineto, ny resaka vetaveta no lazainy fa antony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Aogositra 2019 12:53 GMT
Samy nandray anjara tamin'ny fandrafetana ity tatitra ity i Eduardo Avila, Ellery Roberts Biddle, Lisa Ferguson, Michelle Fong, Hae-in Lim, Sarah Myers ary Bojan Perkov.
Raha ankalazaina ny Andro Erantany ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, ny gazetim-panjakana People's Daily kosa namoaka ny matoandahatsoratra [zh] manipika ireo “fiantraika ratsy sy ny loza miafina mifamatotra amin'ny resaka fiarovana” ny tranonkala ka anaovany fitakiana ny hoe « Raha tsy misy filaminana ao amin'ny aterineto, ahoana no hanananareo fahalalahana ao ? ».
Mba hanaporofoana hoe tsy teny manidina fotsiny ireny, dia nofoanan‘ny sampandraharaha mpanaramaso ny asa fanaovana gazety, ny fanontàna, ny fampielezampeo, ny sarimihetsika ary ny fahitalavitra ny sasantsasany tamin‘ireo fahazoandàlana hamoaka ety anaty aterineto an'i Sina, iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra misahana aterineto ao Shina, tamin'ny filazana hoe manome sehatra natao ho fitsinjarana votoaty vetaveta ilay orinasa. Ireo sasantsasany mpisera ety anaty aterineto dia mihevitra hoe tsy natao lasibatra noho ny fanitsakitsahana lalàna mifandray amin'ny resaka vetaveta i Sina, fa noho ny lazan'ny Weibo, sehatra fototra fanoratana bilaogy bitika tantanin'i Sina.
Ankoatra ireo fepetra noraisina momba an'i Sina, bilaogy 3.300 mahery, kaonty WeChat sy sehatra fifampiresahana maro no niharan'ny fanagiazana na fibahanana ary maherin'ny 20 ireo tranonkala natokana ho an'ny haisoratra no « nasaina nanaraka fitsipika » tao anatin'ilay fanentanana. Ireo orinasa mpampilalao dia nahatsapa tsindry ihany koa : ny Southern Metropolis Daily dia nitatitra fa naharay fampilazana avy amin'ireo manampahefana ny sasany amin'ireo orinasa mpampilalao fa hoe ireo kisarisary amin'ny kilalao dia tsy afaka mampiseho intsony ireo faritra mahamenatra eo amin'ny vatana, na manao akanjo fohy tànana, shorts na bikinis.
Nantsoin'ny vondrona iray misy ireo fikambanana mpiaro ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny zon'olombelona ny Kaomisiona Afrikana sy ny Firenena Mikambana mba hirotsaka an-tsehatra amin'ny raharahan'ireo sivy mpanao gazety voatazona ao Etiopia tamin'ny faran'ny volana Aprily 2014. Ny vondrom-piarahamonina Global Voices dia namoaka fanambaràna iray nitakiana ny famotsorana ireo mpanao gazety, izay ny efatra amin'izy ireo dia mpandray anjara amin'ny asa fandikana ato amin'ny tranonkala GV. Ho fandraisana anjara amin'ilay fanentanana na hanaovana sonia an'ilay fanambarana dia nisy an'ity tato.
Tao Malezia, ireo tranonkala tsy miankina malaza amin'ny fanapariaham-baovao FZ Daily sy Malaysiakini dia tsy nomena alàlana hanonta gazety, satria tondroin'ny governemanta ho manao asa fanaovana gazety “miteraka resabe sy manaitaitra” fotsiny ry zareo mba hisarihana ireo mpamaky. Araka ny Free Malaysia Today, nanambara ny minisitra Ahmad Zahid Hamidi fa noraisina io fanapahankevitra io mba hikendrena ny fiarovana ny vahoaka amin'izay ho fifanjevoankevitra rehetra mety hateraky ny “vaovao be loatra avoakan'ireo karazana gazety samihafa”
Nisy iraka iray avy amin'ny Departemantam-panjakana Amerikàna nanome toky bilaogera enina ao Vietnam hoe ho ampidirin'i Etazonia ao anaty fandaharampotoana amin'ny fifampiresahana manaraka iarahan'ny roa tonta momba ny zon'olombelona ny momba ny fahalalahana nomerika. Vietnam, firenena sosialista tsy misy afa-tsy antoko tokana, no faharoa, manaraka an'i Shina raha resaka isan'ireo bilaogera nofonjaina mitaha amin'ny isan'ny mponina . Io vondrona bilaogera mpikatroka io ihany koa no nangataka tamin'i Etazonia mba hiaro ny fahalalahana maneho hevitra ao anatin'ireo fifampiresahana efa an-dàlana mifandraika amin'ireo fifanarahana fiarahamiasa miampita ny ranomasimbe pasifika, izay mety hisy fiantraikany henjana amin'ny fidirana hahazo vaovao ety anaty aterineto, ankoatra ny zavatra hafa.
Angamba nilaozan'ny Yahoo ny Do Not Track [andianà fandrindràna noheverina hiaro ny fiainana manokana ety anaty tambajotra], saingy ny Electronic Frontier Foundation nandefa ny Privacy Badger, fitaovana iray fampiasan'ny fitety mba hitantavanana ireo tranonkala notsidihana ka hitiliana sy hibahanana ny fanjohiana ataon'ny sasany. Mbola anatin'ny fotoana fanandramana azy ny Privacy Badger, saingy ireo mpampiasa aterineto manana fahaizana amin'ilay sehatra dia asaina manandrana ity fitaovana ity sy mitatitra any amin'ny Github izay mety ho olana.
Christopher Parsons, avy amin'ny Citizen’s Lab nanolotra fepetra vitsivitsy azon'ireo Kanadiàna raisina raha tian-dry zareo ny hahafantatra sao mampita torohay manokana momba ny mpanjifany mankany amin'ireo masoivohom-panjakana ireo orinasa misahana ny fifandraisandavitra any aminy.
Ny 3 May tao Cochabamba, any Bolivia, nidina an-dalambe ireo mpanao hetsipanoherana, nisalotra toy ny akanjon-tsifotra [es] mba hanohitra ny fihisaran'ny fifandraisana atrehan'ireo mpisera amin'ny aterineto ao amin'ny firenena. Ny hetsika Más y Mejor Internet Para Bolivia [es] dia mitaky ny fampidinana ny sarany, sy koriana tsaratsara kokoa ary fisokafana tsaratsara kokoa avy amin'ireo orinasa misahana ny fifandraisandavitra.
Fanatanjahantena 15 ora izay